Shir ka Dhacay Nairobi – Rasaasa News
Apr 12, 2009 Ogaden National Liberation Frornt
Jaliyadda Afrikada Bari ee Somalida Ogadeeniya [JABSO], oo shir isugu timid Magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa waxaa laggaga hadlay arimo khuseeya halganka iyo arimaha bulshada. Shirka oo aad u balaadhnaa ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda Jaaliyada iyo dadweyne aad u fara badan.
Waxay Jaaliyadu si aad ah isugu dayeysaa sidii ay u xoojin lahayd wax u qabashada dadka Qaxootiga ah ee ku sugan dalka Kenya. Dalka Kenya ayaa waxaa ku sugaan kumaankum ruux oo ka soo cararay dhulka Somalida Ogadeeniya oo haatana qaxootinimo ku jooga dalka Kenya.
Shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka labaad ee Jabhada wadaniga xoreynta Ogadeeniya mudane Huseen Mursal Kaahin. Mudane Kaahin ayaa dadweynaha shirka ka soo qayb galay ugu baaqay in ay is kaalmaystaan, isla markaana ay garab istaagaan halganka ay wado Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeeniya.
Golihii Mamulkii Cabdulahi Maxamed Sacdi ee Sanadkii 1993